> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Hard Drive
Sidee ayaan Hard Drive soo kaban karto, tirtiray Pictures?
Hi qof walba, waxaan si qalad ah la tirtiro qaar ka mid ah sawirrada oo ka fayl Picture on my computer. Waxaan u maleynayaa in ay weli ku jiraan drive aan computer ee adag. Waxan u malaynayaa oo ku saabsan sida aan dib ugu heli sawirada aan. Ma haysaa fikrad kasta?
Your malo waa xaq. Sawirrada tirtiray waa ku wadid aad computer ee adag, moodayay in aad mar dambe iyaga si toos ah u heli karaan. Ka hor inta overwritten by xogta cusub ku wadid aad computer ee adag, kuwa sawirada tirtiray suurto gal ah in lagu soo kabsaday karo barnaamij dib u soo kabashada sawirada drive adag tirtiray.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa doorashada ugu fiican ee aad u soo kabsado sawirada tirtiray ka drive adag ee computer Windows ama Mac. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay qasabno yar ay dib u hanato sanamyadiinna la tirtiro. Download version maxkamad barnaamijka si scan sawirada tirtiray ku wadid aad u adag ah. Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay ku eegaan sawiradii laga helay wadid aad u adag ka hor inta soo kabashada.
Ka Hard Drive in 3 Talaabada soo kabsado tirtiray Sawiro
Bal aan wada oofin drive tirtiray adag soo kabashada image la Wondershare Data Recovery for Windows.
Tallaabada 1 Select hab kabashada inuu ku soo bilowdo drive tirtiray adag soo kabashada sawir
Ka dib markii ay ku rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery on your computer Windows, waxaa lagu siin doonaa dhowr hab oo soo kabashada.
Halkan, inuu ka soo kabsado sawirada tirtiray ka drive adag, ha isku dayno "lumay Recovery File" hore.
Fiiro gaar ah: Ha dajiyo barnaamij ku saabsan drive adag in sawirada lagaa tirtiro ka.
Tallaabada xijaab 2 Scan si ay u eegaan sawirada tirtiray
Fadlan dooro Risaalo in sawirada lagaa tirtiro ka oo guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka sawiro laga badiyay.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado sawiro ka ah drive dibadda u adag, waxaad u baahan tahay in ay ku xirmaan your computer iyo in la hubiyo in laga garan karaa your computer.
Tallaabada 3 ceshano sawirada tirtiray ka drive adag
Ugu danbeyn, sawirada aad tirtiray oo dhan waxaa laga heli doonaa oo soo bandhigay suuqa kala barnaamijka. Waxaad iyaga ku eegaan karo in lagu hubiyo sida badan oo ka mid ah sawirada aad tirtiray la soo kabsaday karo.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u doortaan oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin your computer badbaadiyo. Iyo si looga fogaado in xogta overwritten, inaad si fiican u sii lahaa sanamyada soo kabsaday on xijaab kale.